नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यो के वास्तविक कुरा होइन र ? हेर्नुस र मनन गर्नुस त !
यो के वास्तविक कुरा होइन र ? हेर्नुस र मनन गर्नुस त !
Anonymous May 31, 2012 at 7:10 AM
यो सत्य हो सम्पादक ज्यू , सबै ले बुझ्नु जरुरी छ नयाँ नेपाल मा । एउटा कुरा नि - संघियता र जातियता मा फरक छ भन्ने ई मुर्ख हरुले बुझेनन । संघइयता भनेको प्रदेसिक राज्य हो र त्यो कुनै १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला र ५ बिकास क्षेत्र लाई मिलाउन सक्ने कुरा हो । तर यहाँ अनपढ जनाअवर रुपी किराती र भिखरी भन्ने नेता हरु ले दिन गुजार्न तेस्ताइ मुर्ख दिन बिग्रेका काम नभएका लठेब्रा हरु लाई उचाल्दै छन जातिय राज्य को लडाईं गर्नु पर्छ भनेर । खुकुरी ले हान्दिउ भने कानुन छ बोलेर इन्ले सुन्दैनन । एक साथी ले भनेझै छिन्ताङ कान्ड नै मच्चाउनु पर्ने हो त कि कोतपर्ब ? युद्ध हाम्रो चाहना त होइन तर समय ले जे माग गर्छ । हामी ४ स्टेप पछाडि अझै चुप लगेर सुनेर मात्र बसेक छम । भगवान सँग प्रार्थना गर्छम अझै राम्रो होस् कसैको चित्त नदुखोस् ।